सीमा रक्षक देवनारायण यादव एमालेमा
२६ असोज, काठमाडौं । सीमा रक्षक देवनारायण यादव बिहीबार नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । सप्तरीको तिलाठीका यादवलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्वागत गरे । एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले टीका लगाएर यादवलाई पार्टी प्रवेश गराए । सप्तरीको तिलाठी कोइलाडीस्थित नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा भारतले अनधिकृत रुपमा निर्माण गरेका भौतिक संरचना र बाँध भत्काउने अभियानको नेतृत्व यादवले गरेका थिए । त्यसक्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बल र अतिक्रमणकारीले उनीमाथि सांघातिक आक्रमण गरेका थिए । विक्रम संवत २०४९ मा कांग्रेसबाट क्षेत्रीय सदस्य बनेका यादव कांग्रेसका जिल्ला कार्यसमिति सदस्य थिए । यादव अागामी निर्वाचनमा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार हुने सम्भवना समेत रहेको छ ।
हिन्दूराष्ट्र फर्काउन राप्रपाको जनजागरण अभियान सुरु
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउनु पर्ने भन्दै राष्ट्रिय जनजागरण अभियान सुरु गरेको छ । बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममार्फत अभियान सुरु गरिएको हो । अभियानको उदघाटन गर्दै अध्यक्ष…
कर्णाली प्रदेशसभाबाट चार विधेयक प्रमाणीकरण
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको प्रदेश सभाले ४ वटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेको छ । गत माघ २१ गते प्रदेशसभाको पहिलो ऐतिहासिक बैठक बसेयता दर्ता भएका १९ विधेयकमा चारवटा विधेयक प्रमाणीकरण भएका…
डा. केसीप्रति लचिलो हुन सरकारलाई राजपाको सुझाव
काठमाडौं । सरकारलाई समर्थन दिएको राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि लचकताका प्रस्तुत गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । राजपा, नेपालको मंगलबार बसेको पार्टी अध्यक्ष मण्डलको…
नेपाली कांग्रेसद्वारा देशव्यापी सडक आन्दोलन घोषणा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सरकारविरुद्ध देशब्यापी सडक आन्दोलन घोषणा गरेको छ । मंगलबार पार्टी कार्यालयमा बसेको पार्टीका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाका केन्द्रीय पदाधिकारीहरुको बैठकले वर्तमान सरकारका अधिनायकवादी एवं जनविरोधी क्रियाकलापका…